အင်တာနက်မှာ လူကြိုက်များနေတဲ့ အမိုက်စားဓာတ်ပုံတွေ – Trend.com.mm
ကြည့်ရတာ တစ်ချို့လူတွေက ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် ရသတစ်ခုတစ်စုံပေးရမှ
ကျေနပ်သူတွေဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ပုံသေကိုယ့်ရဲ့ပုံကို ရိုးရိုးကြီးရိုက်တာ
ထက် လူတွေစိတ်ဝင်စားလောက်မယ့်ပုံစံမျိုးကို ဖန်တီးပြီး ရိုက်နိုင်တဲ့
သူတို့အရည်အချင်းဟာလည်း ချီးကျုးစရာပဲနော်။ ဓာတ်ပုံရိုက်ဝါဿနာပါ
သူတွေလည်း ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေကို လေ့လာပြီး ကိုယ့်ဘာသာ
ဖန်တီးလို့ရသွားတာပေါ့။ အင်တာနက်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ အမိုက်စား
ဓာတ်ပုံတွေဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ ကြည့်ရအောင် !
People “match” places
"It is not important to make many pictures but that I have one picture right." -#PietMondrian 🔲 The Netherlands is celebrating 100 years of #DeStijl and The Hague's City Hall is dressed for the celebration, inafacade inspired by the famous Dutch artist, Piet Mondrian.
A post shared by Ariel Adkins | Artfully Awear (@artfullyawear) on Apr 17, 2017 at 11:08am PDT
A post shared by Michelle Satterlee (@dressedtomatch) on Nov 8, 2017 at 6:42am PST
A post shared by Sans Peng (@hello_sans_) on Oct 16, 2017 at 3:28pm PDT
Feeling the shelfie love today! Isn’t it just the nicest thing to arrange beautiful things inabeautiful way, and stand back and appreciate the beauty of all the objects together? Just us? 💙 #ryderandhope #shelfie
A post shared by Ryder & Hope (@ryderandhope) on Nov 15, 2017 at 4:18am PST
FBF to summer w/ my dawg💙🏋🏼‍♀️🐕#squatyourdog #imisssummer #ohiopyle #shelovesit #goldenretriever #80poundsoflove #dogsofinstagram #quadsfordays
A post shared by Jessica Louise🌺 (@thaatfitgirl) on Nov 3, 2017 at 2:34pm PDT